I-Ukraine izobeka umlando wokukhishwa kwesitashi samazambane emazweni angaphandle ngesizini ka-2020/21 - umagazini i- "Potato System"
I-Ukraine izosetha umlando wokuthumela isitashi samazambane emazweni angaphandle ngesizini ka-2020/21
в Ama-Analytics, izindaba, Ukuphinda usebenzise kabusha
Ngokwe-EastFruit, ezinyangeni ezinhlanu zokuqala zalesi sizini kuphela, izwe likwazile ukuthekelisa cishe kathathu le mikhiqizo ngaphandle konyaka owedlule wokukhangisa. Khonamanjalo, ukungeniswa kwesitashi samazambane e-Ukraine kwehle kakhulu, kanti ibhalansi yezohwebo kuleliya lizwe ingafinyelela okokuqala ezinkomba ezinhle okungenani eminyakeni emihlanu edlule.
Ngabe konke kumnandi kangako eqinisweni, ingabe i-Ukraine ikwazile ukuguqula ukuthambekela kwesitashi samazambane angenisiwe, futhi yimaphi amathemba anayo imikhiqizo yase-Ukraine emakethe yomhlaba? I-EastFruit icela ukuyixazulula ngosizo lukaSergey Samonenko, umqondisi weVIMAL, umkhiqizi ohamba phambili nomthumeli ngaphandle kwesitashi e-Ukraine, no-Evgeny Kuzin, oyinhloko yamaphrojekthi wamazwe omhlaba iFruit-Inform.com, okuwukuphela kolwazi kanye ne-ejensi yokuhlaziya e-Ukraine ochwepheshe emakethe yezithelo nemifino.
Esikhathini esivela ngoSepthemba 2020 kuya kuJanuwari 2021 kuphela, i-Ukraine yakwazi ukuthekelisa cishe amathani ayizinkulungwane eziyi-1,1 wesitashi samazambane, ngenkathi kumasizini adlule, amanani okuthekelisa unyaka wonke wokuthengisa ayesukela kumathani ayi-100-400. Khonamanjalo, ukungeniswa kwempahla ezinyangeni ezinhlanu zokuqala zesizini yamanje kufinyelele kumathani ayi-700 kuphela, okubuye kube yirekhodi eliphansi ngalesi sikhathi okungenani eminyakeni emihlanu eyedlule yokumaketha.
Ukhiye futhi okuwukuphela kwemakethe yokuthengisa yesitashi samazambane e-Ukraine phesheya kule sizini sekuyiChina, engenise cishe ama-95% akho konke ukuthunyelwa kwe-Ukraine futhi isivele ikwazile ukusetha irekhodi elisha lokungeniswa okuvela e-Ukraine. Kusukela ngoSepthemba 2020 kuya kuJanuwari 2021 kuphela, kwathunyelwa amathani angaphezu kwe-1 XNUMX emikhiqizo yase-Ukraine eChina.
"Ngakolunye uhlangothi, i-Ukraine ikwazile ukwenza inqubekelaphambili yangempela emakethe yamaShayina amazambane anesitashi kulezi zikhathi ezimbalwa ezedlule, futhi manje singasho ukuthi iChina iba yindawo ehamba phambili yokuthekelisa embonini yase-Ukraine," kusho uSergei Samonenko. - Kepha empeleni, kunenkinga efihliwe ekusithekeni kwesitashi esithunyelwa e-Ukraine eChina - Abakhiqizi base-Ukraine bamane baphonswa ngaphandle kwezimakethe zabo ngokulahla ukungenisa okuvela eRiphabhulikhi yaseBelarus. Ukuthengiswa kwasekhaya kuletha ukulahleka ngqo, futhi ukuthekelisa eChina okungenani kuyithuba elithile lokuhlinzeka ngokungenzeka kwezomnotho ekukhiqizeni isitashi samazambane e-Ukraine. "
“I-China iyonke ihamba phambili emhlabeni ekungeniseni zonke izinhlobo zesitashi futhi ngonyaka ithenga amathani ayizigidi ezimbili kuya kwezintathu zalo mkhiqizo. Yize isigaba esiyinhloko sokungenisa emakethe yaseChina isitashi esikhiqizwa ngezilimo eziyizigaxa zomdumbula ezishisayo, ukungeniswa kwesitashi samazambane nakho kubaluleke kakhulu. Yize inamandla amakhulu okukhiqiza, iChina yizwe lesikhombisa emhlabeni ukungeniswa kwesitashi samazambane. Ngakho-ke, ngomkhiqizo waminyaka yonke wamathani ayizitashi ayizigidi ezingama-450-500, iChina isangenisa amanye amathani ayizinkulungwane ezingama-30-60 alo mkhiqizo, ”kuphawula uYevgeny Kuzin.
"Inani lamanje lokungeniswa kwesitashi samazambane e-Ukraine samathani ayi-1,1 XNUMX linomthelela omncane ezimakethe zaseChina futhi libukeka lingabalulekile uma liqhathaniswa nokungeniswa okuvela e-EU," kuphawula uSerhiy Samonenko.
Ngokusho kwe-FAS USDA, inkinga enkulu embonini yokucubungula amazambane eChina yikhwalithi engeyinhle kakhulu yezinto zokusetshenziswa. Ekhiqizweni kwesitashi emakethe yaseChina, kuvame ukusetshenziswa imikhiqizo enqatshelwe engajwayelekile, futhi ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zemakethe zesitashi esezingeni eliphakeme, abadlali bendawo baphoqeleka ukuthi basingenise phesheya. "Ikhwalithi yesitashi sase-Ukraine ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekuqhamukeni kwe-Ukraine emakethe yaseChina," kuvuma uSerhiy Samonenko. "Ukuqinisekiswa okucacile kwekhwalithi ephezulu yesitashi samazambane esinikezwe kusuka e-Ukraine kuya eChina kungaba ngamaqiniso asevele abhaliwe wokukopisha ukufakwa kwemikhiqizo yethu emakethe yaseChina".
Isitashi sase-Ukraine sithuthukiswa emakethe yaseChina, kufaka phakathi neziteshi zokuxhumana zanamuhla, ngokwesibonelo, ngenguqulo yendawo yenethiwekhi yezokuxhumana iTikTok. Khumbula ukuthi ngokufanayo bathuthukisa imikhiqizo yabo futhi, ngokwesibonelo, abathumeli bemikhiqizo abavela eChile, izwe elibhekwa njengesinye sezimpawu zemikhankaso yokuphromotha emhlabeni wezolimo.
"Noma kunjalo, yize i-Ukraine ikwazile ukungena nokuthola indawo emakethe yaseChina, amathemba e-Ukraine kwezinye izinkomba zokuthekelisa awabalulekile kangako. Futhi sonke siyakhumbula ukuthi ukuncika emakethe yokuthengisa eyodwa kuphela kanjani, - kuxwayisa uSergei Samonenko. - Uma sibheka omakhelwane yokuthengisa izimakethe, Ukraine manje cishe amathuba for izimpahla asebenzayo of amazambane isitashi. Onke amazwe asizungezile, ikakhulukazi iBelarus, iRussia kanye namalungu e-EU, asekela ngenkuthalo ukukhiqizwa kwesitashi ezingeni likahulumeni. Ngenxa yalokhu, inani lokuthumela kwethu emazweni angaphambi kweSoviet lincane impela, futhi kunomncintiswano onzima kulezi zimakethe. Futhi abenzi bakula mazwe bathumela imikhiqizo yabo ngenkuthalo e-Ukraine, bakha ingcindezi enkulu emakethe yase-Ukraine kanye namanani entengo kuyo. "
"Ngokuqondene ne-EU, lesi sifunda empeleni asingenisi isitashi samazambane emazweni angaphandle kwe-EU, kodwa ngumthengisi omkhulu walo mkhiqizo, othunyelwa minyaka yonke kwezinye izimakethe, kufaka phakathi i-Ukraine, kusuka kumathani ayi-250 kuya ku-470 wamathani amazambane wesitashi," kuphawula u-Yevgeny Kuzin ...
"Ngaphezu kwalokho, i-EU inesabelo sokungeniswa kwesitashi esivela e-Ukraine sokungenisa ngaphandle kwentela amathani ayizinkulungwane eziyishumi azo zonke izinhlobo zemikhiqizo, agcwaliswa masinyane ngabahlinzeki base-Ukraine, ikakhulukazi isitashi sommbila," kunezela uSerhiy Samonenko.
Ngaphezu kwalokho, amazwe e-EU, ikakhulukazi iPoland, kanye neBelarus bangabadlali abakhuthele emakethe yase-Ukraine yesitashi samazambane angenisiwe. Lawa mazwe amabili isizini ngayinye ahlinzeka kusuka ku-85% kuya ku-94% wakho konke ukungeniswa kwesitashi kusuka kumazambane e-Ukraine.
Khonamanjalo, ngemuva kwesizinda sokulahlwa kokungeniswa okusebenzayo okuvela eRiphabhlikhi yaseBelarus kumasizini amuva nje, ngokusho kukaSergei Samonenko, emabhizinisini ayisithupha ase-Ukraine angenza imikhiqizo yawo, mabili kuphela athulwe ngenkathi yokucubungula ka-2020-2021.
“Isibonelo sesizini ka-2019/20 singakhombisa, lapho izinto eziningana ezingezinhle zenzeka ngasikhathi sinye emakethe ngasikhathi sinye, okwaholela ekwenyukeni okuthe xaxa kokuthengwa kwempahla kwamanye amazwe. Ngakho-ke, ukuqhubeka kokulahlwa kwesitashi kusuka eRiphabhlikhi yaseBelarus kwalandelwa ekwindla ngokubuyekezwa okucijile kwemali kazwelonke, okwenze ngcono kakhulu amathuba okungenisa isitashi samazambane futhi kwanciphisa ukuncintisana kwabathengisi base-Ukraine. Ngokungezelela kulokhu ukukhuphuka kancane kwezindleko zamandla, futhi sithola esinye sezibalo ezirekhodiwe zokungeniswa kwesitashi samazambane okuvela emazweni lapho, ngaphezu kwalokho, kunezinhlelo ezisebenzayo zokuxhasa nokuxhasa umkhakha wamazambane. Ngenxa yalokhu, imakethe ibuswa yizinto ezingeniswa kuleli, kanti intengo yesitashi e-Ukraine engxenyeni yokuqala yesizini yehla ngo-third kusuka ku-UAH 28 / kg kuya ku-UAH 19 / kg, ”kwengeza uSerhiy Samonenko.
Ngokusho kukaSergey Samonenko, isilinganiso esilinganiselwe somkhiqizo wamazambane isitashi e-Ukraine kuze kube u-2019 sasingu-10-15%. Ngakho-ke, abakhiqizi base-Ukraine sebephoqelekile ukuthengisa imikhiqizo yabo ngaphansi kwezindleko. Zonke izinkomba zamabhizinisi embonini seziwohloke kabuhlungu: amavolumu okukhiqiza ehle kakhulu, inzuzo, inzuzo kanye nokukhokhwa kwentela kwehlile. Isimo asizange sithuthukiswe ngokwehla kwamanani okuthengwa kwamazambane.
Ngokwemvelo, isimo esinjalo esikhathini esizayo esiseduze kakhulu singaholela ekuvalweni ngokuphelele kwamabhizinisi nemiphumela emibi kakhulu embonini yesitashi namazambane akhula e-Ukraine. NgoDisemba 15, 2020, iNhlangano Yabakhiqizi Bemikhiqizo Yamazambane Nesitashi e-Ukraine, iholwa nguMthetho wase-Ukraine "Ekuvikelweni Kwabakhiqizi Bezwe Kusuka Ekulahleni Ukulahlwa" kwangomhla kaDisemba 22.12.1998, 330 No. 07-XIV, bafaka Isikhalazo "Ngo ukuqalwa kanye nokwenziwa kophenyo olwa nokulahlwa kokulahlwa kokulethwa kwesitashi samazambane e-Ukraine esivela eRiphabhulikhi yaseBelarus ”eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Kwezomnotho, Ezokuhweba Nezolimo e-Ukraine, obhaliswe ngaphansi kukaNombolo 115916 / 20-XNUMX .
Esinye isici esibalulekile ekubuseni kwesitashi samazambane angenisiwe yikhwalithi yezinto zokusetshenziswa. “Ngeshwa, kwesinye isikhathi ikhwalithi yezinto zokusetshenziswa zase-Ukraine zokukhiqiza isitashi imane nje ayimele ekugxekweni, yize amanani okuthenga amazambane aluhlaza e-Ukraine ngokuvamile ephakeme kunasemazweni ancintisanayo,” kuqhuba uSergei Samonenko.
Ngendlela, njengoba kuphawula u-Evgeny Kuzin, isimo esifanayo siyabonakala emkhakheni wamazambane we-ware e-Ukraine, ngoba, ngemuva kwezinkinga eziqhubekayo nekhwalithi yale mikhiqizo, i-Ukraine iyaqhubeka nokuchitha izigidi zamadola ekuthengisweni kwamazambane , evumela abahlinzeki bemikhiqizo abavela eBelarus ukuthi bathole imali emakethe yase-Ukraine. ILithuania namanye amazwe aseYurophu.
Tags: ukukhiqizwa kwesitashi samazambaneUkraineukuthekelisa isitashi samazambane
Usawoti noma iqhwa?